Alshabab oo Weerarary Bari iyo Bakool
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar culus ku qaaday saldhig ciidanka Puntlkand ay ku leeyihiin meel u dhow Galgalka. Warar madax bannaan oo VOA ay heshay ayaa sheegaya in maleeshiyadu ay muddo kooban halkaasi haysteen, kuna gubeen baabuur dagaal.
Ugu yaraan 4 askari oo ka tirsan Puntland ayaa dagaalkaasi ku dhintay sida la xaqiijiyay, iyadoo 10 kalena ay dhaawacmeen, kuwaasi oo dhaawacooda la geeyay cisbitaalka Bossaso. Puntland ayaa iyadu beenisay in saldhigga laga qabsaday, waxayna dhinaca kale Somaliland ku eedeeyeen inay dagaalka lagu qaaday saldhigga ay ku lug lahaayeen.
Haddaba weriyaheena Bossaso, Faadumo Yassain Jamac ayaa khadka taleenka ee Garowe ku wareystay wasiiru-dowladaha madaxtooyada ahna afhayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Quraan Jecel.
VOA ayaa la xiriiray Somaliland si ay uga hadlaan eedaha Puntland ee sheegaya inay dagaalka ku lug lahaayeen, laakiin saraakiisha Somaliland ayaa sheegay inay jawaab goor dhow ka bixin doonaan.
Dhinaca kale, dagaalyahanada Alshabab ayaa gubay baabuur alaab sidday oo maraysay gudaha gobolka Bakool.
Dhinaca kalena, wararka ka imanaya bartamaha Somalia ayaa sheegaya in ciidmada dowladda Somalia ay dib maanta u qabsadeen degmada Moqokori o ka tirsan gobolka Hiiraan, kadib markii shalay galab ay halkaasi maamulkeeda la wareegeen maleeshiyo ka tirsan al-Shabaab.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kooban nooga soo diray Beledweyne.
Dhageyso Weerarada Alshabab